Lovely Myanmar ⋆ Page2of 2175 ⋆ The Golden Land
နောက်တခါ အအေးဗူးတွေ ဘီယာဗူး တွေဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကိုမဖြစ်မနေသတိထားပါ။
သင့်ကြောင်လေးကသင့်ကုို ချစ်တယ်လို့ ပြောနေတဲ့အမူအရာများ
ခင်နှောင်းဇာတ်ရုပ်ပီပြင်ရန်အတွက် ဝိတ်တင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
By Aung Aung on Tuesday, July 16, 2019
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ အနုပညာလောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကတည်းက ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုရရှိခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီးချောလေးဝတ်မှုံရွှေရည်ဟာ ခင်နှောင်းဇာတ်ရုပ်ပီပြင်ရန်အတွက်ဝိတ် တင်နေပါပီး။ ဝတ်မှုံရွှေရည်ဟfb အကောင့်မှာ အခုလိုဘဲတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ခင်နှောင်းအတွက် ဝိတ်တင်နေတယ် … ပျော်စရာ ကောင်းလိုက်တာ ရွာသူ ရွာသားတွေကလည်း အရမ်းကူညီ ပြီး ပြည့်ဝလိုက်ကြတာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရှိရှိ လောဘ မောဟ မာန်မာန မရှိ ဘဝကို ရွာထဲမှာ ရိုးသားစွာ ဖြတ်သန်းနေလိုက်ကြတာ ချစ်လိုက်တာ တစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်းလိုက်နှုတ်ဆက်ရတာ လည်း ဓလေ့တဲ့ ရွာထဲ လှည့်ရတာလည်း ခံစားချက်အသစ် ဒီမယ် ဒီရွာသူဖြစ်ရတာ ကြိုက်တာဆိုအေ…
ရွှေစက်တော်ဘုရားဝန်းအတွင်း သစ်ပင်(၁၀၀၀)တိတိစိုက်ပျိုးလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နေထူးနိုင်
ဖိုက်တင်မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို သိမ်းပိုက်ရရှိနေတဲ့ နေထူးနိုင်ကတော့ အောင်မြင်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲကတစ်ယောက်အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နယ်ကြိုက်ဇာတ်ကားတွေကို ပရိသတ်ရင်ထဲရောက်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့ ပရိသတ်အားပေးမှုတွေကို သိမ်းပိုက်ရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အပူဒဏ်ကာကွယ်ဖိုသစ်ပင်စိုက်ကြစို့”အစီအစဉ်မှာ နေထူးနိုင်က ဦးဆောင်ပြီးတော့ သစ်ပင်တွေကို စိုက်ပျိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း နေထူးနိုင်ဟာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တန်ခိုးကြီး ဘုရားဖြစ်တဲ့ ရွှေစက်တော်ရဲ့ဘုရားဝန်းအတွင်းမှာ ဘုရားဖူးသူ ခရီးသွားများနဲ့ နောင်လာနောက်သားများအတွက် အရိပ်ရစေရန်အလို့ငှာ သစ်ပင်များကို SO Group နှင့်အနုပညာရှင်များ ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ လှူဒါန်းစိုက်ပျိုး ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစုပေါင်း သစ်ပင်စိုက်ပျိုးလှူဒါန်းပွဲလေးအကြောင်းကို “ဒီနေ့ရွှေစက်တော်ဘုရားဝန်းကျင်တွင်သစ်ပင်(၁၀၀၀)စိုက်ပျိုးကြသည်”ဆိုပြီးတော့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ ထက်ကနေ လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်များနှင်တကွ ဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လှူဒါန်းစိုက်ပျိုးတဲ့ နေရာမှာ နေထူးနိုင်အပါအဝင် မင်းရာဇာ ၊ ဖြူဖြူထွေး၊ဟန်ဆက်လူနဲ့ တခြားသော ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံ အနုပညာရှင်တွေက ပါဝင်းခဲ့ပြီး ပရိသတ်ကြီးရေ ကမ္ဘာကြီးအပူဒဏ်ကာကွယ်ဖို့ အပင်လေးတွေကို စိုက်ပျိုးနေတဲ့ မင်းသားနေထူးနိုင် …
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသိမ်းခံရလို့ ကလေးစီး ကားနဲ့ ကျောင်းသွားတဲ့ကျောင်းသူလေး
Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်မှာ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအထူးပြုတက်ရောက်နေတဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ် Monroe ဟာ Waka Flocka ဖျော်ဖြေပွဲကနေအိမ်ကိုအပြန် ကားမောင်လာစဉ် ရဲက သူမကို အရက်သေစာ သောက်စားထားလား မစားဘူးလား စစ်ဆေးပြီး သူမရဲ့ ကားလိုင်စဉ်ကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ရက်တွေရောက်တော့ လိုင်စင်းအသိမ်းခံရတဲ့အပြင် သူမရဲ့ ဖခင်က သူမရဲ့ ကားကို ယူပြီး ဆန်မားကို့စ် ဘက်ကို ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူမအတွက်တော့ ကျောင်းသွားရင် စီးဖို့ စက်ဘီးတစ်စီးချန်ထားခဲ့ပါတယ်။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လည်း မရွေးရသေးဘူး၊ အဖေထားခဲ့တဲ့ စက်ဘီးလည်း မစီးချင်တဲ့အတွက် သူမရဲ့ မုန့်ဖိုးတွေနဲ့ စုပြီးဝယ်စီးလို့ရမဲ့ ဈေးပေါပေါနဲ့ စီးစရာကို စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် Craigslist ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကနေ ဒေါ်လာ ၆၀ဆယ်တန် ကလေးစီးတဲ့ ဂျစ်ကားလေးကို တွေ့ပြီးဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူဝယ်ယူလိုက်တဲ့ …
Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် သိပ္ပံနည်းကျ စမ်းသပ်ပြီး တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ နေ့တိုင်း ငါးကြီးဆီ စားခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။ နှလုံး ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်စေ ငါးကြီးဆီ မှာ Omega-3 Fatty Acids ဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် နှလုံးကျန်းမာရေးကို တိုးတက်စေပါတယ်။ နှလုံး ခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်းနဲ့ ရုတ်တရပ် နှလုံးရပ်တန့်ခြင်း နဲ့ လေဖြတ်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ် ကို အားကောင်းစေ ငါးကြီးဆီ မှာ Omega-3 Fatty အက်ဆစ် ပါဝင်တာကြောင့် မှတ်ဉာဏ် ကို ပိုအားကောင်းစေပါတယ်။ Omega -3 Fatty အက်ဆစ်က ဆဲလ်တွေရဲ့ နံရံတွေနဲ့ ပုံစံကို တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။ အာရုံကြောဆဲလ်တွေကလည်း သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက် ဒီအက်ဆစ်ဓာတ်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ငါးကြီဆီက အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်မှုကြောင့် မှတ်ဉာဏ်အားနည်းလာမှုကို …
Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် စိပ်ရမဲ့ ရက်လေးတွေ သက်မှတ်ပြီးပါပြီ ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ထိဖြစ်ပါတယ် သက်သတ်လွတ်လည်း စားစရာမလိုပါဘူး အချိန်လည်း တိတိကျကျ စိပ်စရာမလိုပါဘူး နေ့တိုင်း မှန်မှန်စိပ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ် သက်သက်လွတ်စား အချိန်တိကျရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ စိပ်မဲ့ နေ့ရက်များ ၉ပါးစလုံးကိုနေ့တိုင်းတစ်ပတ်စီ အရဟံ (၁)ပတ် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ (၁)ပတ် ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော (၁)ပတ် သုဂတော (၁)ပတ် လောကဝိဒူ (၁)ပတ် အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ (၁)ပတ် သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ (၁)ပတ် ဗုဒ္ဓေါ (၁)ပတ် ဘဂဝါ (၁)ပတ် 16.7. 2019. မှ 24 .7. 2019 အထိ အရဟံ သိဒ္ဓိ (၉)ပတ် 25 . 7. …
Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် မကြာခင်က Trevor Thompson ဆိုတဲ့ ပညာရှင်တစ်ဦးက ဘီယာသောက်တာဟာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သောက်တာထက် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘီယာနှစ်ခွက် သောက်တာက ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲ ညောင်းညာနေတာတွေကို အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သောက်တာထက် ပိုမြန်မြန်သက်သာစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတာ သိရှိခဲ့တာပါ။ ဒီ အ ဆို ကို မှန် မ မှန် စမ်း ဖို့ သပ် Greenwich University က သိ ပ္ပံ ပ ညာ ရှင် တွေ က လူ အ ယောက် ၄၀၀ ကျော် ကို ဘီ ယာ သောက် ထား တဲ့ သူ နဲ့ မ …
မိုင်းတွင်းကို ကမ္ဘာ့အဆင့်ပြောင်းထားတဲ့ တရုတ်က ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၀၀)ခုနှစ်မတိုင်ခင်လောက်က ဒီနေရာဟာ မိုင်းတွင်းတွေနဲ့ မိုင်းလုပ်သားတွေအပြည့်ရှိခဲ့တဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ (၂၀၀၀)ပြည့်နှစ်အရောက်မှာတော့ တရားဝင်အလုပ်လုပ်မှုတွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး၊ ဒီအတိုင်းပဲ ပစ်ထားလိုက်ကြပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာနဲ့အမျှတိုင်ကြားမှုတွေက နေ့စဉ်ပါပဲ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တော့ နိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ပြည့်မီတဲ့ ကျောက်မီးသွေးကို ရဖို့ အသုံးချခဲ့ပြီး၊ နေရာက တော်တော်လေးကို ရှုခင်းရှုကွက်ကောင်းတဲ့ ပုံစံအဖြစ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက မျက်စိကျအပြီးမှာတော့ ကမ္ဘာ့အဆင့်ဟိုတယ်အဖြစ် ပုံစံပြောင်းအသက်သွင်းခဲ့ပြီး ဒီနေ့ခေတ်မှာ မြင်နေရတဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ အံ့ဖွယ်ဟိုတယ်ကို ရလာပါတယ်။ ဟိုတယ်ကို တရုတ်မှာကိုပဲ နာမည်က အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အံ့ဖွယ်ဟိုတယ်၊ ကွာရေးဟိုတယ်၊ ရှင်မြောင်ကွာရေးဟိုတယ်၊ တွင်းနက်ကြီးဟိုတယ်၊ အင်တာကွန်တီနန်တယ် ရှန်ဟိုင်းဟိုတယ် စသည်ဖြင့်ပါ။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် (၂၈၈)ပေမှာရှိပြီး၊ တကယ်ဆောက်ထားတဲ့ မြေပြင်က မြေအောက်မှာ မဟုတ်ဘဲ အနောက်ဘက်က နံရံကို ကပ်ဆွဲပြီးဆောက်ထားတာပါ။ အားသာချက်က …
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိနေတယ်လို့ သင်လုံးဝမထင်ထားတဲ့ နေရာ (၆)ခု
ထူးခြားဆန်းကြယ်တာတွေပဲ ဖြစ်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ အဖြစ်အပျက်၊ သတ္တ၀ါတွေပဲ သင်မမြင်ဖူးမကြားဖူးသေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိနေတယ်လို့ တောင်သင်မသိထားတဲ့ နေရာတွေ ရှိနေပါတယ်။ အံ့ဖွယ်နေရာတွေ ဖြစ်ပြီး တော်တော်လေးကို ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အလှတရားတွေကို သင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁)ကျောက်တုံးဝါ အမျိုးသားဥယာဉ် သူကတော့ အမေရိကန်မှာရှိပါတယ်။ ပေ (၂၅၀)နဲ့ (၃၀၀)အကြား ပတ်ချာလည်အကျယ်ရှိပြီး၊ သတ္ထုဓာတ်တွေကြွယ်ဝနေတဲ့ ရေပြင်ပြာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဘေးက အ၀ါရောင်တွေဟာ ကျောက်တုံးတွေဖြစ်ပြီး၊ ဒီလိုအရောင်းအသွေးစုံနေရတာဟာ ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။ (၂)ရောင်စုံ ကျူလစ်ပန်းခင်း နယ်သာလန်နိုင်ငံက ပန်းခင်းကြီးပါ။ အပြင်မှာလည်း တကယ်အဲဒီအတိုင်ပဲဖြစ်ပြီး နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ ဟိုလန်း၊ အယ်ကမာရာမှာရှိပါတယ်။ ဒီပန်းခင်းဟာ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ထဲမှာပါပြီး၊ မသေခင်မှာ တစ်ခေါက်လောက်မြင်ဖူးသွားသင့်တယ်လို့ ရောက်ဖူးသူတိုင်းကပြောပါတယ်။ (၃)ပင်လယ်နီ ဆူးဒါလို့ခေါ်တဲ့ ပင်လယ်ရေညှိတစ်မျိုးက နွေရာသီဆိုပေါက်လာပြီး၊ နွေရာသီပြီးလို့ ကြွေကျလာတဲ့အခါမှာ ပင်လယ်က အနီရောင်ပြောင်းသွားပါတော့တယ်။ …
Zawgyi ရွှေဘိုမြို့ဂုဏ်ဆောင်ဝါတွင်းဘုရားစဉ်ဆွမ်းလောင်းပွဲကို ၁၁၇၆ ခုနှစ် ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းအမရပူရ၌စိုးစံနေစဉ်အချိန်မှစတင်လောင်းလှူပူဇော် ခဲ့ရာ ယခု နှစ်ဆိုလျှင် နှစ်ပေါင်း(၂၀၅)နှစ်ပင်ရှိခဲ့လေပြီ။ ထိုစဉ်ကတည်းက လောင်းလှူပူဇော်ခဲ့သော ဆွမ်းလောင်းပွဲကို ယခုနောင်လာနောင်သား ရွှေဘိုသူ/သား များမှ ဆက်လက်လောင်းလှူလျှက်ရှိပါသည်။ရွှေဘိုမြို့ဝါတွင်းဘုရားစဉ်ဆွမ်းလောင်းပွဲဘုရားစဉ်များမှာ ၁။လမ်းလည်ဘုရား=နယုန်လကွယ်နေ့ ၂။ဇဗ္ဗူ့ဆီမီးဘုရား=ဝါဆိုလဆန်း ၈ ရက်နေ့ ၃။ရွှေတန်ဆာဘုရား=ဝါဆိုလပြည့်နေ့ ၄။ရွှေခြင်္သေ့ဘုရား=ဝါဆိုလဆုတ် ၈ ရက်နေ့ ၅။နေရဗာန်ဘုရား=ဝါဆိုလကွယ်နေ့ ၆။ဆုတောင်းးပြည့်ဘုရား=ဝါခေါင်လဆန်း ၈ ရက် ၇။ရွှေကူကြီးဘုရား=ဝါခေါင်လပြည့်နေ့ ၈။သက်တော်ရှည်/ရဘုရား=ဝါခေါင်လဆုတ်၈ရက် ၉။ရွှေပေါ်ကျွန်းဘုရား=ဝါခေါင်လကွယ်နေ့ ၁၀။ရွှေသိမ်တော်ဘုရား=တော်သလင်းလဆန်း၈ ရက်နေ့ ၁၁။ရွှေချက်သိုလ်ဘုရား=တော်သလင်းလပြည့်နေ့ ၁၂။ဖောင်တော်ဦးဘုရား=တော်သလင်းလဆုတ် ၈ ရက်နေ့ ၁၃။မြို့ထောင့်စေတီဘုရား=တော်သလင်းလကွယ် ၁၄။ပုခန်းဘုရား=သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၈ ရက်နေ့ ၁၅။လောကမာရဇိန်ဘုရား=သီတင်းကျွတ်လပြည့် ၁၆။ရွှေကြက်တောင်ဘုရား=သီတင်းကျွတ်လဆုတ် ၈ ရက်နေ့ ၁၇။စိန်ဘုရား=သီတင်းကျွတ်လကွယ်နေ့ ၁၈။ဗိုလ်မောင်ဘုရား=တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း၈ရက် ၁၉။ချမ်းသာကြီး/ရဘုရား=တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ၂၀။အောင်မြေဘုရား=တပို့တွဲလပြည့်နေ့ ၂၁။အနောက်လောကမာရဇိန်ဘုရား=တပေါင်းလ ပြည့်နေ့ ၂၂။ညောင်ရေသွန်းပွဲ=ကဆုန်လပြည့်နေ့ စသည့် ဝါကြို …
မနေ့ညက၊ အင်းစိန်၊ အာလိမ်ငါးဆင့်ဘုရားက ကရင်နှစ်သစ်ကူး ပွဲဈေးတန်းကို မိသားစုနဲ့ လျှောက်ဖြစ်တယ်။ သားအငယ်လေး (၂ နှစ်၊ ၅ လ အရွယ်)ကို ချီပြီးတော့၊ ဘုရားဝင်းထဲကို ဝင်မိတော့၊ လူတွေက တစ်အားကျပ်နေတယ်။ နည်းနည်းလောက် တိုးမိပြီးတော့၊ ခပ်လှမ်းလှမ်းက နောက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူက “မတိုးချင်တော့ဘူး။ ပြန်ထွက်ကြရအောင်” ဆိုလို့ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဘေးနားက လူလတ်ပိုင်းအရွယ် ယောင်္ကျားတစ်ယောက်က “ဟာ။ ပိုက်ဆံနှိုက်သွားပြီ။ လိုက်။ လိုက်။ ကလေးကျွန်တော့ကိုပေး။” ဆိုပြီး ကျွန်တော်ချီထားတဲ့ သားအငယ်ကို ရုတ်တရက် လှမ်းယူလာပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဘောင်းဘီအိတ်တွေထဲကို ပြန်စမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ညာဖက်အိပ်ထဲမှာ ဟန်းဖုန်း၊ ဘယ်ဘက်အိပ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံအိတ်၊ ပြီးတော့ ကားသော့။ ကိုယ့်ပစ္စည်း (၃)မျိုးစလုံး ရှိနေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကလေးက …
← Previous 1234… 2,175 Next →